बुङगल नगरपालिकाकी उपमेयर मिनाले गरिन् भत्ताकै लागि यस्ताे हर्कत
बझाङ । जिल्लाको बुङगल नगरपालिकाकी उपमेयर मिना जागरीले आफुले स्वयमसेविकाको भत्ता नपाएको भन्दै कफलसेरी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख शिवराज खठायतलाई गालीगलोज गरेकी छन् ।
गत कार्तिक महिनामा भिटामिन ए खुवाएबापतको स्वयमसेविकालाई दिईने भत्ता नदिएको भन्दै खडायतलाई गालीगलोज गरेकी हुन् ।
केदारस्युँ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निशा र राजुको ‘फोन कल रेकर्ड’ (अडियोसहित)
सार्वजनिक अडियोमा उनले उपमेयर को हो भन्ने कुरा भेटमा चिनाई दिने भन्दै धम्की दिएकी छन् । अडियोमा उपमेयर जागरीले खडायतलाई तेरो कुरा सुन्नुछैन भन्दै अपशब्द प्रयोग गर्दै गाली गलोज गरेकी छन् । सबै स्वयमसेविकको पैसा दिई सकेको भए पनि तपाईलाई नभेटेका कारण पैसा दिन सकिएन भन्ने प्रसंगमा उपमेयर जागरीले अपशब्द प्रयोग गर्दै तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दै गालीगलोज गर्न भ्याईन् ।
कुराकानीका सिलसिलामा उनले भुक्तानीका बेला किर्ते दस्तखत गर्न कुन कानुनले दिएको छ, भनेकी छन् । तर उपमेयरलाई दोहोर सुविधा लिन पाउने कानुनमा छैन भन्ने समेत थाहा छैन् । स्वास्थ्य चौकी प्रमुख खडायतले माफी माग्दा पनि उनको आक्रोश रोकिएन् । साविककाे कफलसेरी गा.वि.स वडा नं की स्वयमसेविका रहेकी उपमेयर जागरी हाल बुङगल नगरपालिका उपमेयर हुन् । स्वयमसेविकाको पदबाट राजिनामा नदिएरै उनी उपमेयर भएकी हुन् । अहिले पनि उनी स्वास्थ्य चौकीले स्वयमसेविकालाई दिने भत्ता लिदैँ आएकी छन् ।
यस्तै घरमा सुत्केरी भएकी महिलालाई सुत्केरी भत्ता नदिएको भन्दै उनै उपमेयर मीना जागरीले कफलसेरी स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी निरुपति चौधरीलाई अभद्र व्यवहार गरेकी छिन् । नियमानुसार घरमा सुत्केरी भएकी महिलालाई सुत्केरी भत्ता दिन नमिल्ने भनेपछि उपमेयर जागरीले अनमी चौधरीलाई तथानाम गाली गर्दै जागर छोडेर जान धम्की दिएकी थिईन् ।
उपमेयरको धम्की छि अनमी चौधरीले पत्र लेख्दै जागिर छोडेर हिडेको स्वास्थ्य चौकी प्रशासनले जनाएको छ । अनमी चौधरी विगत तीन बर्षदेखी करारमा काम गर्दै आएकी छन । उपमेयर जागरी स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर अनमी चौधरी माथी खनिएकी हुन् । अडियोमा जागरीले अनमी चौधरीलाई बुवाको छोरी भए जागिर छोडेर जा भन्दै गाली गलोज गरेको प्रष्ट छ ।
अगाडीको समयमा व्यवहारिक रुपमा घरमा सुत्केरी भएकी महिलालाई पनि सुत्केरी भत्ता दिदैँ आएको अडियोमा प्रष्ट छ । गरिब तथा आर्थिक अवस्था नाजुक भएकालाई व्यवहारिक रुपमा दिदाँ फरक नपर्ने भन्दै उपमेयर जागरीले चौधरीलाई आग्रह गरेको तर अनमी चौधरीले दिन नमिल्ने बताएपछि अनमीलाई धम्क्याएको प्रष्ट हुन्छ । अगाडीको आर्थिकको जिम्मा आफुलाई थाहा नभएको भन्ने अनमीको जवाफमा उपमेयर जागरीले म संग बढी फुर्ति लगाउने, तेरो बाउले दिएको उपमेयर हो ? अहिल्यै जागिर छोडेर गईहाल भनेकी छन् ।
यस विषयमा जानकारी लिन अनमी चौधरीसँग सम्पर्क हुन सकेन् । यस विषयमा उपमेयर जागरीले भने स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सामान्य भनाभन मात्र भएको बताएकी छिन । उनले बाहिर भन्नेले आफ्नो बेईज्जत गर्न खोजेको भन्दै नाम जोडेर अनावश्यक हल्ला फैलाएको दुखेसो गरिन् ।
सामान्य भनाभन भएको स्विकार गर्दै उपमेयर जागरीले स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिको बैठकले सबै कुरा मिलाई सकेको र अनमी चौधरीलाई जागिर नछोडन फोनमार्फत आग्रह गरेको बताईन् । जागीर छोडेर गयो भन्ने सुनेकी छु । मैले आक्रोशमा केही नराम्रो शब्द बोलेर गल्ती भएको भए पनि राजनैतिक प्रतिसोधका कारण विपक्षीले नानाथरी आरोप लगाएर बदनाम गर्न खोजे उनले भनिन् ।
'लकडाउन' उल्लङ्घन गर्दा गयो स्वास्थ्यमन्त्रीकाे पद
आइसोलेसन वार्डमै मृत्यु भएका युवकको कोरोना रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’
कुहिएको चामल बाडेपछि लफडा, वडाअध्यक्षले दिए यस्तो धम्की
औषधि खरिद प्रकरणबारे नेकपा नेताले उठाए प्रश्न, ओली मौन
याैन सम्पर्क गर्दा काेराेना भाइरस सर्छ कि सर्दैन ? चिकित्सकले दिए यस्ताे सुझाव
लकडाउनमा लैंगिक हिंसा बढ्यो : महिला आयोग
वडा अध्यक्षको गाडी र वैध हतियारसहित सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा
पत्रकार महासंघले भन्यो, ‘सुरक्षित ढंगले समाचार सम्प्रेषण गराउने वातावरण बनाऊ' (विज्ञप्तिसहित)
मास्क लुकाउने, राहत मनपरी गर्ने र स्प्रे भन्दै पानी मात्र छेप्ने प्रतिनिधिविरुद्ध नेकपाको आक्रोश